Faritr’i 67 Ha Tra-tehaka ilay gadra lava mpangarom-paosim-behivavy
Any am-ponja no niandry ny fitsarana azy ny lehilahy iray izay efa nigadra in-telo.
Voasambotry ny polisim-pirenena avy ao 67ha teny amin’ny fiantsonan’ny taksibe Jovena 67ha, ny zoma farany teo rehefa avy nanendaka vehivavy tao anaty taksibe Ivato izy. Tamin’ny 8 ora maraina no niditra tamin’ilay taksibe teo 67ha avaratra ity lehilahy sahabo ho 35 taona ity. Nony tonga teo amin’ny fiantsonana Jovena 67ha anefa dia nidina ny fiara izy. Olona niray taksibe aminy ihany no nahita ny harom-paosiny tao anaty fiara ka niara-nidina taminy sady niantso ny polisy niasa teo amin’ny manodidina. Nanakana ilay tovolahy ary nitondra azy tany amin’ny paositry ny polisy hatao famotorana ireo polisy. Rehefa natao ny fanadihadiana dia vola 20.000 ariary no hita tao am-paosiny izay vao azony tamin’ny harom-paosy nataony tao anaty taksibe. Tamin’ny fanadihadiana no nahafantarana fa in-telo nigadra noho ny antony fanendahana miharo herisetra ity lehilahy. Mazana fantatry ny mpamily mpanampy ireo mpangarom-paosy mandeha dia midina fiantsonana iray fotsiny fa noho ny tahotra valifaty dia tsy sahy miantso mpitandro filaminana izy ireny.